Chelsea oo Xasuuqday Swansea iyo Kooxaha Manchester United,Tottenham,Liverpool,Stoke iyo Palace oo Guulo Gaaray “Sawirro” – Radio Muqdisho
Kooxda Swansea City ayaa waxaa garoonkeeda Liberty Stadium 0-5 uga badiyay kooxda Chelsea.
Kooxda Chelsea ayaa goolka la hor martay,waxaana daqiiqadii koowaad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Oscar.
Ciyaaryahan Diego Costa ayaa daqiiqadii 20-aad ee ciyaarta goolka labaad u dhaliyay kooxda Chelsea.
Ciyaaryahan Costa ayaa dhaliyay goolkiisii 16-aad ee horyaalka ingiriiska ee Premier League-ga.
Ciyaaryahan Diego Costa ayaa deqiiqadii 36-aad ee ciyaarta goolka sedaxaad u dhaliyay kooxda Chelsea,halka ciyaaryahan Oscar uu hal daqiiqo ka dib goolka afaraad u sii raaciyay kooxda Chelsea.
Ciyaaryahan Andre Schuerrle ayaa daqiiqadii 80-aad ee ciyaarta goolka shanaad u dhaliyay kooxda Chelsea.
Kooxda Chelsea ayaa horyaalka ingiriiska ee Premier League-ga ku hogaamineyso 52-dhibcood,halka kooxda Swansea City ay horyaalka uga jirto kaalinta sagaalaad,iyadoo leh 30-dhibcood.
Kooxda Queens Park Rangers ayaa waxaa garoonkeeda Loftus Road 0-2 uga badiyay kooxda Manchester United.
Ciyaaryahan Marouane Fellaini oo bedel ku soo galay ciyaarta ayaa daqiiqadii 58-aad ee ciyaarta goolka koowaad u dhaliyay kooxda Manchester Uinted.
Ciyaaryahan James Wilson oo isna bedel ku soo galay ciyaarta ayaa dhamaadkii ciyaarta goolka labaad u dhaliyay kooxda Manchester United.
Kooxda Manchester United ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska ka soo gashay kaalinta sedaxaad,waxana ay leedahay 40-dhibcood,halka kooxda QPR ay ka mid tahay sedaxda kooxood ee ugu hooseyso horyaalka ingiriiska.
Kooxda Tottenham Hotspur ayaa garoonkeeda White Hart Line 2-1 uga badisay kooxda Sunderland.
Tababaraha kooxda Sunderland Gus Poyet ayaa ciyaaryahankiisa cusub ee Jermain Defoe safay kulankiisii ugu horeeyay ee horyaalka ingiriiska.
Kooxda Tottenham ayaa goolka la hor martay,waxaana daqiiqadii sedaxaad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Jan Vertonghen.
Ciyaaryahan Sebastian Larsson ayaa daqiiqadii 31-aad ee ciyaarta gool laad xur ahaa u dhaliyay kooxda Sunderland.
Ciyaaryahan Christian Eriksen ayaa dhamaadkii ciyaarta goolka labaad ee guusha u dhaliyay kooxda Tottenham.
Kooxda Tottenham ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska ka soo gashay kaalinta shanaad,waxana ay leedahay 37-dhibcood,halka kooxda Sunderland ay horyaalka uga jirto 16-aad,iyadoo leh 20-dhibcood.
Kooxda Aston Villa ayaa waxaa garoonkeeda Villa Park 0-2 uga badiyay kooxda Liverpool.
Kooxda Liverpool ayaa goolka la hor martay,waxaana daqiiqadii 25-aad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Fabio Borini.
Ciyaaryahan Rickie Lambert ayaa ayaa daqiiqadii 79-aad ee ciyaarta goolka labaad u dhaliyay kooxda Liverpool.
Kooxda Liverpool ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska ka soo gashay kaalinta todobaad,waxana ay leedahay 35-dhibcood,halka kooxda Aston Villa ay horyaalka uga jirto kaalinta 14-aad,iyadoo leh 22-dhibcood.
Kooxda Leicester City ayaa waxaa garoonkeeda King Power Stadium 0-1 uga badiyay kooxda Stoke City.
Ciyaaryahan Bojan Krkic ayaa daqiiqadii 63-aad ee ciyaarta goolka guusha u dhaliyay kooxda Stoke City.
Kooxda Stoke City ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska uga jirto kaalinta tobanaad,waxana ay leedahay 29-dhibcood,halka kooxda Leicester City ay ka mid tahay sedaxda kooxood ee ugu hooseeya horyaalka.
Kooxda Burnley ayaa waxaa garoonkeeda Turf Moor 2-3 uga badiyay kooxda Crystal Palace.
Kooxda Burnley ayaa bilowgii ciyaarta dhalisay labo gool oo deg deg ah,waxaana u kala dhaliyay ciyaaryahanada kala ah Ben Mee iyo Danny Ings.
Ciyaaryahan Dwight Gayle ayaa daqiiqadii 28-aad ee ciyaarta gool u dhaliyay kooxda Crystal Palace.
Ciyaaryahan Jason Puncheon ayaa bilowgii qeybtii labaad ee ciyaarta goolka labaad ee barbardhaca u dhaliyay kooxda Crystal Palace.
Ciyaaryahan Dwight Gayle ayaa dhamaadkii ciyaarta goolka sedaxaad ee guusha u dhaliyay kooxda Crystal Palace.
Macalin Alan Pardew ayaa guushii labaad oo isku xigta laga gaaray kooxdiisa cusub ee Crystal Palace.
Kooxda Crystal Palace ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska ka soo gashay kaalinta 12-aad,waxana ay leedahay 23-dhibcood,halka kooxda Burnley ay horyaalka uga jirto kaalinta 17-aad,iyadoo leh 20-dhibcood.